OTU ESI EJIKỌTA ABỤ ABỤỌ NA AUDACITY - ỌDỊDỊ - 2019
Yandex.Browser bụ onye a ma ama maka ịrụ ọrụ siri ike, ma mgbe ụfọdụ n'ihi ihe dịgasị iche iche, ọ ga-adị mkpa iji malitegharịa ihe nchọgharị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ịmechara mgbanwe ndị dị mkpa, nkwụnye nkwụnye nkwụnye, nkwụsị n'ihi enweghi ego, wdg. Ọ bụrụ na ị na-ahụkarị mkpa iji regharịa ihe nchọgharị ahụ, ọ ga-adị mma ịmara ụzọ dị iche iche ịmalitegharịa, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ ha nwere ike ịba uru karia usoro usoro.
Kedu ka esi malitegharịa Yandex Browser?
Usoro 1. Mechie windo
Yandex.Browser, dị ka ihe omume ọ bụla ọzọ na-agba ọsọ na kọmpụta, na-erube isi n'iwu niile maka ijikwa windo ahụ. Ya mere, ị nwere ike igbochi ihe nchọgharị ahụ site na ịpị obe n'ogo elu nke window ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-anọgide na ịmaliteghachi ihe nchọgharị ahụ.
Usoro 2. Nchịkọta ọnụ
Ụfọdụ ndị ọrụ na-achịkwa keyboard karịa ngwa (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ touchpad na laptọọpụ), ya mere n'ọnọdụ a, ọ bụ ihe dị mfe iji mechie nchọgharị site n'otu oge ịpị igodo Alt + F4. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịmalitegharịa ihe nchọgharị ahụ na omume nkịtị.
Usoro 3. Site na onye nlekọta ọrụ
A na-ejikarị usoro a eme ihe ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ gwụla ma achọghị ka e mechie ya site na ụzọ ndị edepụtara n'elu. Kpọọ onye nlekọta ọrụ site na igodo ọnụ Ctrl + Shift + Esc na taabụ "Nhazi"chọta usoro"Yandex (32 ibe)"Pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ"Wepu ọrụ ahụ".
N'okwu a, ihe nchọgharị ahụ ga-emezue ọrụ ya, ma mgbe obere sekọnd ị ga-enwe ike iweghachi ya dị ka ọ dị na mbụ.
Ụzọ 4. Ọhụụ
Usoro a enyere ọ bụghị naanị imechi ihe nchọgharị iji mepee ya aka, kama iji bubatagharịa. Iji mee nke a, na ntanet ọ bụla, mepee ebe adreesị ma dee ebe ahụ nchọgharị: // Malitegharịa ekwentịwee pịa Tinye. Ihe nchọgharị ga-Malitegharịa onwe ya.
Ọ bụrụ na ị na-ala azụ iji aka dee aha a n'oge ọ bụla, mgbe ahụ ị nwere ike ịmepụta, dịka ọmụmaatụ, ihe edokọbara, site na ịpị nke, a ga-Malitegharịa ihe nchọgharị ahụ.
Ị mụtara ụzọ ndị dị mkpa iji malitegharịa nchọgharị, nke nwere ike ịba uru n'ọnọdụ dị iche iche. Ugbu a, ọ ga - adị mfe karị ijikwa ihe nchọgharị weebụ gị, ị gaghị enwe nsogbu na ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ jụrụ ịzaghachi omume gị ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Ọfọn, ọ bụrụgodị na ịmalitegharịa Yandex. Nchọgharị anaghị enyere aka, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ isiokwu, otu esi ewepu Yandex kpamkpam Nchọgharị sitere na kọmputa gị na otu esi wụnye Yandex.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ọdịdị 2019